Isu-soo-bixii ololaha maalinta 2aad ee xisbiga talada haya ee UDUB iyo taageerayaashiisa | Xarshinonline News
Isu-soo-bixii ololaha maalinta 2aad ee xisbiga talada haya ee UDUB iyo taageerayaashiisa
Hargeysa (NNN)- Xisbiga talada haya ee UDUB, ayaa maanta muujiyay dhoola tus aad u balaadhan, kana sameeyay Gobollada dalka Somaliland, gaar ahaan Beerta xorriyada ee Magaaladda Hargeysa. Isu soo baxaasi oo ayna u kala hadhin yar iyo weynba, waxa ay ahayd maalintii labaad ee Ololaha Xisbiga UDUB ku muujiyay taageeradooda.
Madaxweyne ku xigeenka, Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa khudbad dheer ka jeediyay, waxana uu ku bilaabay hadalkiisa “In Badan ayaa la lahaa UDUB way ku fashilantay barnaamujkeedi Siyaasadeed, kumaanaan fashilminee ee Beri [Isniin] ayaanu keenaynaa oo cidwalba la siinayaa. Ta labaad Xisbigeenu [UDUB] waa Xisbi fac-weyn ee waxaan idinkula dar-daarmayaa sida Xisbiyada kale inaan la caytamin oo aan cidna la xajiimayn oo ololahana si fiican loo galo,”.
Filed under doorashooyinka, udub, xisbi
← Nin ku nool waddanka Soomaaliya oo nolosha la wadaaga Yaxaasyo ay saaxiibeen
K’naan oo u tartamaya abaal marin caalami ah (Fadlan u Codee) →